बहस : के राख्ने प्रदेशको नाम ? सम्भावित नामको सूचीसहित
काठमाडौं,९ माघ- प्रदेशको संख्या, नाम र सीमाङ्कनको विषय निकै जटिल बन्दा पहिलो संविधानसभा असफल भयो । दोस्रो पटक दलहरुले थोरै चलाखी गरे, प्रदेशको संख्या र सीमाङ्कन टुंग्याए अनि नाम तथा राजधानी तोक्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेशसभालाई नै छाडे । सीमाङ्कनको विषयमा केही विरोध त भयो, तर प्रदेशको नाम १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ भनेरै सबैले चित्त बुझाए । प्रदेश राजधानीको लफडा अहिले चलिरहेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रदेशसभा बैठकहरु बस्ने तयारी भइरहँदा अब प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । सातवटै प्रदेशमा विभिन्न नामहरुमाथि चर्चा भइरहेका छन् ।
हामीले ७ वटा प्रदेशको सम्भावित नाम के हुन सक्छन् भनेर संस्कृतिविद् जगमान गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौँ । गुरुङ प्रदेशको नाम राख्दा सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको स्थान, नदी र हिमाललाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
'जातीय आधारमा नाम राख्नुहुँदैन, त्यसले विवाद बल्झिन सक्छ,' लोकान्तरसँग संस्कृतिविद् गुरुङले भने, 'सांस्कृतिक सम्पदा, नदी वा हिमालको नामबाट प्रदेशको नाम राख्न सकिन्छ ।'
हामीले ७ वटा प्रदेशको नाम के-के हुन सक्छन् भनेर उनीसँग सुझाव मागेका थियौँ ।
यस्तो छ उनको सुझाव :
प्रदेश १ : सगरमाथा वा कोशी
प्रदेश २ : मिथिला
प्रदेश ३ : वाग्मती
प्रदेश ४ : गण्डकी
प्रदेश ५ : लुम्बिनी
प्रदेश ६ : कर्णाली वा भेरी
प्रदेश ७ : सेती
चर्चामा जे छन्-
प्रदेश १ : सगरमाथा,कोशी,विराट,लिम्बुवान, किरात
प्रदेश नम्बर १ को नामका लागि सगरमाथा र कोशीसँगै विराट, लिम्बुवान र किरात चर्चामा छन् । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यही प्रदेशमा पर्छ । यस्तै कोशी नदी पनि पूर्वी नेपाल भएर बग्ने सबैभन्दा ठूलो नदी हो ।
पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति अन्तर्गतको उप-समितिले तयार पारेको १४ प्रदेशको प्रतिवेदनमा विराट, लिम्बुवान र किरात भनिएको क्षेत्र अहिले प्रदेश १ भित्रै पर्छ, सोही कारण यी नामहरु पनि प्रदेशको सम्भावित नामका रुपमा चर्चामा छन् ।
प्रदेश २ : मधेश, मिथिला,भोजपुरा,जनकपुर, सिम्रौनगढ
प्रदेश नम्बर २ को नामका लागि सबैभन्दा चर्चामा मधेश नै छ । २०६३ सालको माघ महिनाबाट तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनपश्चात मधेश शब्द निकै चर्चामा रहँदै आएको छ ।
यसका अलावा ऐतिहासिक मिथिला क्षेत्र यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले मिथिला राख्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालिसकेको छ । संस्कृतिविद् गुरुङसमेत प्रदेश २ को नाम मिथिला नै राख्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।
यस्तै मैथिलीसँगै भोजपुरी समुदायको पनि बसोबास रहेकाले यसको नाम भोजपुरा राख्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् । पहिलो संविधानसभा कांग्रेसले गरेको प्रस्तावमा यस क्षेत्रमा रहने प्रदेशको नाम जनकपुर राख्नुपर्ने उल्लेख थियो । यस्तै सिम्रौनगढ राख्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ ।
प्रदेश ३ : वाग्मती,नारायणी,राजधानी,ताम्सालिङ, नेवा
प्रदेश नम्बर ३ को नाम वाग्मती राख्नुपर्ने संस्कृतिविद् गुरुङको सुझाव छ । वाग्मती यस क्षेत्र भएर बग्ने ऐतिहासिक नदी हो । यस्तै देशको केन्द्रीय राजधानी पनि यहीँ पर्ने भएकाले राजधानी प्रदेश राख्नुपर्ने आवाज पनि सुनिने गरेको छ । यसका अलावा संविधासभामा तत्कालीन उपसमितिले पेश गरेको १४ प्रदेशको खाकामा ताम्सालिङ र नेवा प्रदेश भनिएका सबै क्षेत्र र नारायणी प्रदेशका रुपमा प्रस्ताव गरिएका चितवन र मकवानपुर पनि पर्छन् । त्यसैले यी नामहरु पनि चर्चामा नै छन् ।
प्रदेश ४ :गण्डकी/गण्डक,धवलागिरी,गोरखा, तमुवान
प्रदेश नम्बर ४ को नाम गण्डकी राख्नुपर्ने संस्कृतिविद् गुरुङको सुझाव छ । गण्डकी यस क्षेत्रको प्रमुख नदी हो । साविकको गण्डकी अञ्चल पनि यही क्षेत्रमा पर्छ । यस्तै माओवादीले यस क्षेत्रलाई गण्डक भन्ने गरेको थियो । यसका अलावा धवलागिरी, गोरखा र तमुवानको पनि चर्चा छ । धवलागिरि हिमाल र गोरखा ऐतिहासिक स्थान भएकाले चर्चामा छन् भने, तमुवान संविधानसभाको तत्कालीन समितिले प्रस्ताव गरेका कारण अझै पनि चर्चामा छ ।
प्रदेश ५ : लुम्बिनी,थरुवान/थरुहट,मगरात, रुरु
महामानव गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी यही प्रदेशमा पर्छ । बुद्धको जन्मस्थललाई संसारमा चिनाउने हो भने प्रदेशको नाम नै लुम्बिनी राख्नुपर्ने मत बलियो छ । यसका अलावा थारुवान/थरुहट र मगरात भनिएका क्षेत्र पनि यहीँ पर्छन् । त्यसैले यी नामहरु पनि चर्चामा छन् । ऐतिहासिक रुरु क्षेत्र पनि यहीँ पर्ने भएकाले रुरु प्रदेश राख्नुपर्ने माग पनि कहीँ कतै सुनिने गरेको छ ।
प्रदेश ६ : कर्णाली, भेरी
प्रदेश नम्बर ६ को सम्भावित नाम नै कर्णाली हो भन्दा फरक नपर्ला । यस प्रदेशको नाम कर्णाली राख्ने विषयमा खासै बिमति सुनिँदैन । संस्कृतिविद् गुरुङ पनि कर्णाली नाम नै उपर्युक्त हुने बताउँछन् । कर्णाली यस क्षेत्र भएर बग्ने प्रमुख नदी हो । यसका अलावा भेरी पनि सम्भावित नामको रुपमा चर्चामा छ ।
प्रदेश ७ :महाकाली, सेती, खप्तड,मानसखण्ड, सुदूरपश्चिम
प्रदेश नम्बर ७ को नामका लागि पनि नदीबाट सेती र महाकाली तथा ऐतिहासिक क्षेत्रबाट खप्तड र मानसखण्डसँगै सुदूरपश्चिम पनि चर्चामा छन् । सेती र महाकाली यस क्षेत्र भएर बग्ने प्रमुख नदी हुन् भने ऐतिहासिक खप्तड क्षेत्र यहीँ पर्छ । खप्तड क्षेत्र बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछामको सीमा क्षेत्रमा फैलिएको छ । खप्तड यहीँ पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्जको नामसमेत राखिएको छ । कतिपयले यसलाई ऐतहासिक तथा सांस्कृतिक मानसखण्ड भन्ने गरेका छन् । यस्तै साविकको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र सिंगै यो प्रदेशमा पर्ने भएकाले सुदूरपश्चिम नै नाम राख्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् ।
कसरी तोकिन्छ प्रदेशको नाम ?
प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले तोक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
हेर्नुहोस् संविधानको धारा २९५ :
यहाँ उल्लेख धारा ५६ को उपधारा ३ मा सातवटा प्रदेश र त्यसमा समावेश भएका जिल्लाहरुको नाम राखिएको छ ।
कोरोनाकालमा उल्टो यात्रा : दशैंतिहारको मुखमा गाउँ...